ကပ်ရောဂါ နဲ့ ခွေးအူခြင်း နိမိတ် ယခုတလော ညတိုင်း နီးပါး ခွေးတွေ အူနေကြ တဲ့ အကြောင်း နိမိတ်ကောက် အဟော – Let Pan Daily
အ-မင်္ဂလာမို့ မရေးခဲ့တာ ပါ။ မိတ်ဆွေ လေးငါးဦး ထံတော့ ဖုံးဆက် ပြောဖြစ်ခဲ့ပါသေး၏။ ၁၁ ရက်နေ့ ည ၁ ခွဲ ၂ လောက် ခွေးတွေ တော်တော်အူပါသည်။ လမ်းမကြီးပေါ်တွေကအူတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ခွေးအူသံ ရှည်/ကြာ/စွဲ၍ မအူပါ။ အူ တာတော့ လမ်းမကြီးတွေဘက်ကဟုသာ ကြားမိပါသည်။ ရုတ်တရက်အူပြီး သိပ်မကြာလိုက် ရပ်သွားပါသည်။ ဂရုတစိုက်နားထောင်ကြည့်ပါသည်။ အသံ…မရှည်ပါ။ မကြာပါ။ စွဲ၍မအူပါ။ ထို့ကြောင့် ပဲ့စင်ကြွေသွားတာတွေ ဖြစ်လာသော်လည်း အူသံစွဲရှည်မကြာ၍ ပဲ့စင်ကြွေလွင့်ခြင်းတို့ ဒီထက်သိပ်မများလောက်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
မှတ်ချက်(၁) လမ်းသွယ် လမ်းကြားတွေမှာအူပါက ယခုထက် အစများစွာဆိုးတတ်ပါသည်။ မှတ်ချက်(၂) ခွေးအူခြင်းသည် ညည့်၏ ပထမယံကျော် ည၁၀ ကျော်မှ ညည့်၏ဒုတိယယံ ည ၁၂ ကျော်တွင်း သန်းခေါင်ဝန်းကျင် များ၌အူပါက ပို၍ကျက်သရေယုတ်၏ဟုအဆိုရှိ၏။
မှတ်ချက်(၃) ခွေးတို့သည် အရပ် ၈ မျက်နှာ ဗရမ်းပတာလှည့်အူပါက ပို၍ ပို၍ဆိုးစေဟုအဆိုရှိ၏။ မှတ်ချက်(၄) ခွေးတို့သည် အရပ်မျက်နှာ တစ်မျက်နှာတည်းသို့ ဦးတည်အူပါက အဆိုးအညံ့တို့ များစွာသက်သာ၏ဟု အဆိုရှိ၏။ ယခုသည် ညမထွက်ရအမိန့်ရှိနေ၍ ထွက်မကြည့်လိုက်သဖြင့် အဘယ်အရပ် မျက်နှာမျိုးသို့အူနေ ကြသည်ကိုမသိ မမြင်လိုက်ပါ။
လွန်ခဲ့သော ၃ လခန့်က ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာ လမ်းမကြီးတွေ ပေါ်ခွေးအူတာ လူအယောက်များစွာက လောက်လေးဂွဖြင့် ပစ်ကြတာတောင် ခွေးအုပ်စုက အအူမပျက် ထူးထူးဆန်းဆန်း အူကြပါသတဲ့ သေနတ်မိုးပေါ်ထောင်ဖေါက်သည်အထိ သွားရောက်တားမြစ်သော်လည်း ​သေနတ်ဖေါက်ချိန် စက္ကန့်ပိုင်းမျှသာ ရပ်သွားပြီး ဆက်လက် ၍ အူနေကြပါသတဲ့ ၅ ရက်အတွင်း သောင်းချီသေကြေပျက်စီးပါသတဲ့ . . . အခုတော့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်များက အစိုးရ၏အစီအစဉ်ဖြင့် ပရိတ်တော်များ လှည့်လည်ရွတ်ဖတ်နေကြပါသည်။
အ-မင်ျဂလာမို့ မရေးခဲ့တာ ပါ။ မိတျဆှေ လေးငါးဦး ထံတော့ ဖုံးဆကျ ပွောဖွဈခဲ့ပါသေး၏။ ၁၁ ရကျနေ့ ည ၁ ခှဲ ၂ လောကျ ခှေးတှေ တျောတျောအူပါသညျ။ လမျးမကွီးပျေါတှကေအူတာပါ။ ဒါပမေဲ့ ခှေးအူသံ ရှညျ/ကွာ/စှဲ၍ မအူပါ။ အူ တာတော့ လမျးမကွီးတှဘေကျကဟုသာ ကွားမိပါသညျ။ ရုတျတရကျအူပွီး သိပျမကွာလိုကျ ရပျသှားပါသညျ။ ဂရုတစိုကျနားထောငျကွညျ့ပါသညျ။ အသံ…မရှညျပါ။ မကွာပါ။ စှဲ၍မအူပါ။ ထို့ကွောငျ့ ပဲ့စငျကွှသှေားတာတှေ ဖွဈလာသျောလညျး အူသံစှဲရှညျမကွာ၍ ပဲ့စငျကွှလှေငျ့ခွငျးတို့ ဒီထကျသိပျမမြားလောကျဟု ဆိုခငျြပါသညျ။
မှတျခကျြ(၃) ခှေးတို့သညျ အရပျ ၈ မကျြနှာ ဗရမျးပတာလှညျ့အူပါက ပို၍ ပို၍ဆိုးစဟေုအဆိုရှိ၏။ မှတျခကျြ(၄) ခှေးတို့သညျ အရပျမကျြနှာ တဈမကျြနှာတညျးသို့ ဦးတညျအူပါက အဆိုးအညံ့တို့ မြားစှာသကျသာ၏ဟု အဆိုရှိ၏။ ယခုသညျ ညမထှကျရအမိနျ့ရှိနေ၍ ထှကျမကွညျ့လိုကျသဖွငျ့ အဘယျအရပျ မကျြနှာမြိုးသို့အူနေ ကွသညျကိုမသိ မမွငျလိုကျပါ။
လှနျခဲ့သော ၃ လခနျ့က ဘရာဇီးနိုငျငံမှာ လမျးမကွီးတှေ ပျေါခှေးအူတာ လူအယောကျမြားစှာက လောကျလေးဂှဖွငျ့ ပဈကွတာတောငျ ခှေးအုပျစုက အအူမပကျြ ထူးထူးဆနျးဆနျး အူကွပါသတဲ့ သနေတျမိုးပျေါထောငျဖေါကျသညျအထိ သှားရောကျတားမွဈသျောလညျး ​သနေတျဖေါကျခြိနျ စက်ကနျ့ပိုငျးမြှသာ ရပျသှားပွီး ဆကျလကျ ၍ အူနကွေပါသတဲ့ ၅ ရကျအတှငျး သောငျးခြီသကွေပေကျြစီးပါသတဲ့ . . . အခုတော့ ရနျကုနျမွို့တှငျးသို့ သံဃာတျော အရှငျသူမွတျမြားက အစိုးရ၏အစီအစဉျဖွငျ့ ပရိတျတျောမြား လှညျ့လညျရှတျဖတျနကွေပါသညျ။
သငျရှေးခယျြ လိုကျ တဲ့ သဈပငျ က ပွောပွမယျ့ မကွာခငျ သငျကွုံ တှရေ့ မယျ့ အရာမြား